Esory ny ordinatera voafafa ao amin'ny Outlook
Androany dia hojerentsika fa tsotra tsotra izao, saingy amin'ny fotoana iray ihany, hetsika mahasoa - fanesorana taratasy voafafa. Amin'ny fampiasana maharitra ny mailaka an-tsoratra, am-polony am-polony sy taratasy an-jatony no voangona ao amin'ny lahatahiry mpampiasa. Ny sasany dia voatahiry ao amin'ny Inbox, ny hafa ao amin'ny Sent, Drafts ary ny hafa.
Ahoana no fomba hananganana kaonty Mail ao amin'ny Outlook
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia efa nampiasa ny mailaka avy amin'ny mail.ru. Ary na dia eo aza ny fahafahan'ity serivisy ity manana aterineto mora amin'ny miasa amin'ny mailaka, dia aleon'ny mpampiasa sasany miasa amin'ny Outlook. Fa, mba hahafahanao miasa amin'ny mailaka amin'ny mailaka, tsy maintsy manitsy ny mailaky ny mpanjifa ianao.
Famoronana mailaka ao amin'ny Outlook
E-mail dia manitatra tsy tapaka ny sanda ara-barotra tsy ampiasaina. Isanandro dia mitombo ny isan'ireo mpampiasa mandefa mailaka amin'ny Internet. Amin'io lafiny io dia ilaina ny mamorona tetikasa manokana izay mety hanamora io asa io, hahazoana mandray sy handefa mailaka mora kokoa.
Microsoft Outlook 2010: fananganana kaonty
Rehefa avy nanangana kaonty ianao ao amin'ny Microsoft Outlook, indraindray mila filaharam-be fanampiny ianao. Misy ihany koa ireo tranga izay manova ny fepetra sasantsasany ny mpandraharaha mpanolotra tolotra, ary noho izany dia ilaina ny manova ny votoatin'ny kaonty amin'ny programa mpanjifa. Andeha hojerentsika ny fomba hananganana kaonty any amin'ny Microsoft Outlook 2010.
Inona no tokony hatao rehefa mampifanaraka ny rindrankajy sync ao amin'ny Outlook
Isaky ny manomboka Outlook ianao, dia apetraka ny lahatahiry. Ilaina ny mandray sy mandefa taratasy. Na izany aza, misy ireo toe-javatra izay tsy ahafahan'ny synchronization mandritra ny fotoana lava, fa miteraka fahadisoana samihafa. Raha efa nahita olana toy izany ianao, dia vakio ity torolalana ity, izay hanampy anao hamaha io olana io.
Ahoana ny fametrahana Yandex.Mail amin'ny MS Outlook
Raha toa ianao ka mampiasa ny mailaka Microsoft Outlook amin'ny mailaka ary tsy mahafantatra ny fomba tokony hampifanaraka azy amin'ny miasa amin'ny mailaka Yandex, dia makà minitra vitsy amin'ity fampianarana ity. Eto isika dia manara-maso akaiky ny fomba fanamafisana ny mailaka Yandex amin'ny fomba fijery. Fiatrehana fiomanana Mba hanombohana fananganana mpanjifa, avelao atomboka izany.
Inona no tokony hatao raha tsy mandefa mailaka intsony ny Outlook
Raha, rehefa miara-miasa amin'ny Outlook mail client, ny tsy mandefa mailaka dia tsy mahafinaritra foana. Indrindra raha mila manao haingana ny gazety ianao. Raha toa ka efa niseho tamin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izany ianao nefa tsy afaka hamaha ilay olana, dia vakio ity torolalana kely ity. Eto isika dia mijery toe-javatra maromaro izay miatrika ny mpampiasa indrindra matetika.
Manamboatra valinteny ahodin-tsoratra amin'ny Outlook
Noho ny mahamety, ny mpanjifa Outlook Mail dia manome ny mpampiasa azy ny fahafahana mamaly avy hatrany ny hafatra tonga. Afaka manatsotra ny asa amin'ny mailaka izany, raha ilaina ny mandefa valiny mitovy ho setrin'ny mailaka an-tsoratra. Ankoatra izany, ny valin-koditra azo atao dia mety ho azo ampiasaina amin'ny fidirana sy fisidinana rehetra.
Raha miasa betsaka amin'ny e-mail ianao, dia mety efa niatrika toe-javatra toy izany ianao, raha nisy taratasy nalefa tsy nahy tamin'ny mpamaky diso na ny taratasiny dia tsy marina. Ary, mazava ho azy, amin'ny tranga toy izany dia tiako ny hamerina ilay taratasy, saingy tsy fantatrao ny fomba hitadidiana ny taratasy ao amin'ny Outlook.
Manangana Gmail amin'ny Outlook
Raha mampiasa ny tolotra mailaka Google ianao ary te-hanendry ny Outlook hiasa miaraka aminy, fa hanana olana sasantsasany, dia vakio tsara ny toromarika. Eto izahay dia hijery amin'ny antsipirihany amin'ny dingana amin'ny fametrahana mailaka mpanjifa mba hiasa amin'ny Gmail. Tsy tahaka ireo tolotra Yandex sy Mail nalefa matetika, ny fametrahana Gmail ao amin'ny Outlook dia dingana roa.
Kalendre Google Calendar miaraka amin'ny Outlook
Raha mampiasa mpanjifa mailaka Outlook ianao, dia angamba efa nijery ny kalandrie natsangana ianao. Amin'izany, afaka mamorona fampahatsiahivana maro, asa, marika fisehoan-javatra ary zavatra maro hafa. Misy ihany koa ny tolotra hafa izay manome fahaiza-manao tahaka izany. Amin'ny ankapobeny, ny kalandrie Google koa dia manome fepetra mitovy amin'izany.
Microsoft Outlook: Fandefasana mailaka
Microsoft Outlook dia programa mailaka mahasoa sy mahomby. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy dia ao anatin'ity fampiharana ity ianao dia afaka mampiasa boaty maromaro amin'ny alàlan'ny mailaka isan-karazany indray mandeha. Nefa, noho izany, mila ampidirina amin'ny programa izy ireo. Andeha hojerentsika ny fomba ampidirana mailaka mankany Microsoft Outlook.
Ravao ny Outlook Passwords
Raha toa ka manadino na manadino ny tenimiafina avy amin'ny Outlook sy ny kaonty noho ny antony iray ianao dia tsy maintsy mampiasa programa ara-barotra mba hananganana ny tenimiafina. Ny iray amin'ireo fandaharan'asa ireo dia ny rindrambaiko Outlook Password Recovery Lastic amin'ny fiteny Rosiana. Noho izany, mba hamerenana ny tenimiafina, mila maka ny fitaovana sy mametraka izany ao amin'ny solosainao.
Microsoft Outlook: mamorona folder vaovao
Rehefa miasa miaraka amin'ny mailaka elektronika marobe, na karazana taratasim-pifaneraserana, dia tsara ny manoratra taratasy any amin'ny lahatahiry samihafa. Io endri-javatra io dia manome ny programa mailaka Microsoft Outlook. Andeha hojerentsika ny fomba hamoronana milina vaovao amin'ity fampiharana ity. Ny paik'ady hamoronana lahatahiry iray Ny Microsoft Outlook, izay mamorona tranokala vaovao dia tsotra.
Manandrana ny sonia any Outlook
Noho ny fisian'ny fonosana mailaka avy amin'ny Microsoft, ny soratra dia afaka mampiditra sonia efa voaomana. Na izany aza, rehefa mandeha ny fotoana dia mety misy toe-javatra toy ny hoe mila manova ny sonia ao amin'ny Outlook. Ary ato amin'ity boky ity dia hijery ny fomba ahafahanao manova sy manova sonia.
Ahoana no hamafa ny kaonty any Outlook
Ny mpanjifan'ny mailaka an'ny Microsoft dia manome mombamomba ny mombamomba azy ho tsotra sy tsotra mba hiarahana amin'ny kaonty. Ankoatra ny famoronana kaonty vaovao sy fametrahana ireo efa misy, dia misy ny fahafahana manala ireo tsy ilaina. Ary hiresaka momba ny famafana ireo kaonty anio isika. Noho izany raha mamaky ity torolalana ity ianao, dia midika izany fa mila miala amin'ny kaonty iray na maromaro ianao.
Manangana ny Outlook amin'ny asa izahay
Saika ny programa rehetra, alohan'ny fampiasana azy, dia tsy maintsy alamina mba hahazoana ny vokatra faran'izay tsara avy aminy. Ny mpanjifan'ny mailaka Microsoft, MS Outlook, dia tsy miavaka. Ary noho izany, androany dia hojerentsika fa tsy ny fametrahana mailaka Outlook fotsiny ihany no atao, fa koa ireo programa hafa programa.
Famahana ny olana amin'ny famoahana ny Outlook
Eo amin'ny fiainan'ny mpampiasa Outlook dia misy fotoana toy izao izay tsy manomboka ny programa. Ankoatra izany, matetika dia mitranga tsy ampoizina izany ary amin'ny fotoana tsy mety. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia maro no manomboka manakorontana, indrindra raha mila mandefa haingana na mandray taratasy ianao. Noho izany, androany dia nanapa-kevitra izahay ny handinika antony marobe hoe tsy manomboka sy manafoana ny fomba fijery.
Microsoft Outlook: avereno mailaka voafafa
Rehefa miasa miaraka amin'ny litera maro dia afaka manao fahadisoana ny mpampiasa ary mamafa taratasy manan-danja. Azony atao koa ny manaisotra ny taratasy fangatahana, izay ho raisina ho toy ny tsy misy ilana azy, fa ny fampahalalana hita ao dia mila ny mpampiasa amin'ny ho avy. Amin'ity tranga ity dia lasa maika ny olana momba ny famerenana ny mailaka voafafa.
https://termotools.com mg.termotools.com © Outlook 2019